Epacadostat (INCB024360) powder (1204669-58-8) hplc =98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Epacadostat (INCB024360) upfu
Rating: SKU: 1204669-58-8. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika kuhuwandu hweEpacadostat (INCB024360) powder (1204669-58-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Epacadostat (INCB024360) video yepoda
Epacadostat (INCB024360) powder Mifananidzo
Name: Epacadostat (INCB024360) powder
Molecular Kurema: 438.23
Color: Muchena kusvika pachena-poda yakachena
Epacadostat (INCB024360) poda mukushandiswa
Epacadostat powder iyi inowanika mumuromo inonzi hydroxyamidine uye inhibitor ye indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO1), ine simba rekuita immunomodulating uye antiineoplastic mabasa. Epacadostat targets zvinosungirwa uye inosunga ku IDO1, inzyme inokonzera kusvibiswa kwe tryptophan mujinrenine. Nokudzivisa IDO1 uye kuderedza kynurenine mumatomu masero, INCB024360 inowedzera uye inodzorera kupararira nekushandiswa kwemasero ezvirwere zvakasiyana-siyana, kusanganisira dendritic cells (DCs), NK cells, uye T-lymphocytes, uyewo interferon (IFN) uye kuderedza mumakumbo anokonzerwa nekutonga T masero (Tregs). Kushanda kwemuviri wemuviri, iyo inodzingwa mumakondomu akawanda, inogona kudzivisa kukura kweDOO-NUMX-kuratidza tumarara masero. IDO1 inonyanyisa kunzwisiswa nemhando dzakasiyana-siyana dzechirwere chema cell uye DCs.
INCB024360 powder yakashandiswa mumisungo yekudzidza kurapwa kweHL, Melanoma, Glioblastoma, Mucosal Melanoma, uye Ovarian Carcinoma, pakati pevamwe.
Iyo data inopa chikwereti kune Incyte yekutenda mune nzira yekuita kweEpacadostat powder. Mishonga inogadzirisa dhizii inonzi IDO1 kuti idzivirire maitiro ezvirwere zvemuviri. Epacadostat powder inhibits enzyme iyi kuti idimbure pasi ichi kuitika, zvichibatsira maitiro ezvirwere zvekuzvidzivirira kuti arove chiremera nemasimba ayo ose. Nepo mamwe mashoko akadikanwa kuti asimbise hypothesis, izvo zvinogona kuva nechinangwa chekutengesa kwemashamba emuno-oncology.
Incyte's data yakanyatsotarisana nekusanganiswa kweBristol-Myers 'Opdivo neJervoy, iyo yakakunda FDA kugamuchirwa pakutanga kwegore rapera pamusoro pesimba rePSS reZ11.5 mwedzi yevarwere vane melanoma yakakura.
Pane zvikonzero zvekufunga kuti musiyano mutsva pakati pePFS inowanikwa kubva mumakiriniki ekuedzwa achazopedzisira ashandura muganhu weIncyte. Chiitiko chaBristol-Myers chakanyoresa varwere-vasingatendi, asi zvimwe zvidzidzo muIncyte kudzidza zvakamboshandiswa. Incyte's treatment-naive kushandiswa kwekare kunosvika kune imwe yenyika yePFS asi iyo inowanikwa pamatanhatu, 12 uye 18 mwedzi inoratidza kuti iri munzira yekuvandudza mhinduro yeOpdivo-Yervoy.
Incyte inogonawo kuratidza kuchengeteka kwe data kuti iite nharo yekubatana kwayo inogona kunge iri nani yeBristol-Myers. Ikozvino chiitiko chakashumwa kuti 17% yevarwere vakatambura chikamu chechitatu kana zvakanyanya kuitika zviitiko zvakashata zvine chokuita nemishonga. Iko inofananidzwa nemigumisiro yakagadzirwa neBristol-Myers 'kusanganiswa, iyo, mumushumo kutanga kwegore rino, yakabatanidzwa kune 58% muzana wegiredhi yechitatu kana yechina zviitiko zvakashata.
Epacadostat powder inhibitor ye indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) ine IC50 kukosha kwe7.1 nM muHeLa masero ayo anoratidzira zvishomanana kuita zvinopesana nemakemikari anonzi IDO2 kana tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) .1 Yakaratidzwa kukurudzira T uye kuurayiwa kwechisikigo-sekukura, kuwedzera kukwidziridzwa kweFNN-γ, uye kuderedza kutendeuka kumatare anonzi T (Treg) akafanana-siyana mumararamiro emhando yevanhu allogeneic lymphocytes ane dendritic masero kana tumarara masero.1 Epacadostat powder inogonawo kudzivisa tumarara kukura mumagunha anoremara mumarara mumararamiro anonzi lymphocyte.
Chirevo chinowanikwa mumumuromo chinonzi hydroxyamidine uye inhibitor ye indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO1), ine simba rekudzivirira immunomodulating uye antiineoplastic mabasa. INCB024360 zvinokonzerwa nehupfu uye anosunga kuDIDO1, enzyme inokonzera kusvibiswa kwe tryptophan mujinrenine. Nokudzivisa IDO1 uye kuderedza kynurenine mumatomu masero, kuwedzera kweEpacadostat powder uye kunodzokorora kupararira uye kushandiswa kwemasero ezvirwere zvakasiyana-siyana, kusanganisira dendritic cells (DCs), NK cells, uye T-lymphocytes, pamwe ne-interferon (IFN), uye kuderedza kuora-kunobatanidza kutungamirira T cells (Tregs). Kushanda kwemuviri wemuviri, iyo inodzingwa mumakondomu akawanda, inogona kudzivisa kukura kweDOO-NUMX-kuratidza tumarara masero. IDO1 inonyanyisa kunzwisiswa nemhando dzakasiyana-siyana dzechirwere chema cell uye DCs. Chengetera kwekushanda kwekliniki inoshandisa uchishandiswa ichi.
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) ndiyo inofanirwa kukura maitiro ekurwisa mutezo ekudzivirira zvirwere zvekudzivirirwa kwemasimba nekusimudzira mutemo wechidiki chetachiona uye chekudzivirira chiremera chechidiki, zvichiita kuti chiremera chiwedzere kuburikidza nekubvumira mishonga yemukenza kuti irege kudzivirirwa. Epacadostat powder ipfungwa, yakanyanyisa uye inosarudza muromo inhibitor weDNA inokonzera chirwere chemune microenvironment, nokudaro inodzorera kugadzirisa kushanda kwemapurisa emune. Mune zvidzidzo zvese-ruoko, kusanganiswa kwe INCB1 powder uye immune checkpoint inhibitors yakaratidza uchapupu-hwe-pfungwa mune varwere vane mararaoma asingagoneki kana asingagadziriswi. Mune zvidzidzo izvi, INCB024360 powder pamwe chete neCCTLA-024360 inhibitor ipilimumab kana kuti PD-4 inhibitor KEYTRUDA inowedzera maitiro ekupindura kana ichienzaniswa neongororo yezvidzivirira zvekuzvidzivirira muzvirwere zvekuzvidzivirira inhibitor chete.
Kubatanidza IDO inhibitor Epacadostat powder neikvolumab (Opdivo) yakaratidza zviratidzo zvinokurudzira zvebasa kune varwere vane squamous cell carcinoma yemusoro nemutsipa (SCCHC) nevaya vane melanoma, maererano nezvakawanikwa kubva muchikamu I / II ECHO-204 kuongororwa pa iyo 2017 ASCO Annual Meeting.
Kubatanidzwa kwakaratidza kuti chinangwa chekuita chirongwa (ORR) che63% uye kupindura kwakakwana (CR) chiyero che5% kune varwere vane chirwere-naive melanoma, mumuviri-ruoko, yakazarura-mavara. Mune avo vane SCCHC, ORR yakanga iri 23% uye CR iyo yaive 3%. Kubatanidzwa kwakanga kusingabatsiri pakusarudzwa nevarwere vane kenza yemaovari uye cheraireal cancer (CRC).
"INCB024360 powder pamwe nivolumab yaishanda muchikamu II melanoma uye squamous cell carcinoma yemusoro neyemitsipa cohorts," akadaro coauthor kudzidza Karl D. Lewis, MD, purofesa anofambidzana, Dhipatimendi reMedical Oncology, University of Colorado Anschutz Medical Campus. "Mhinduro yakawonekwa zvisinei nemataurirwo ePD-L1 uye chinzvimbo cheHPV. Mhinduro dzese dzaienderera mberi pakudimburwa kwedata. "
Muchitsauko I chikamu chekudzidza, Epacadostat powder dose yakakura kubva ku25 mg kaviri zuva rimwe nerimwe ku 300 mg kaviri zuva rimwe nerimwe. Muchikamu chechipiri chikamu, varwere vakagamuchira 100 mg kaviri zuva rimwe nerimwe uye 300 mg kaviri zuva rega rega yeEpacadostat powder. Nivolumab pakutanga yaitarisirwa ku3 mg / kg mavhiki e2 ose, ayo akachinjwa ku 240 mg IV mavhiki ose e2 muchikamu chechipiri chechidzidzo. Zvakawanikwa zvakataurwa pa ASCO nokuda kwekuchengeteka zvakabva kune zvikamu zviviri zvekudzidza apo kushanda kwakakosha kwakabva kune boka reboka rechipiri.
Kune varwere vane melanoma isina kubatwa (N = 40), iyo ORR ine chirwere che 100-mg (n = 6) ye INCB024360 poda yaiva 100%, iyo yakave nemhinduro dzakakwana. Neyo 300-mg dose (n = 34), iyo ORR yaiva 56% uye CR iyo yaive 6%. Chirwere chekushaya chirwere (DCR; ORR pamwe nechirwere chakagadzikana) chaiva 85%. Muavo vane PD-L1-positive tumor (n = 7), iOrR yaiva 71% kusvika ku29% muboka re PD-L1-negative (n = 7). Mhinduro dzose dzakanga dzichienderera mberi, nehuwandu hwemasvondo e16 +.
Muchikwata cheCSCN, umo varwere vakanga vagamuchira ≤2 mitsara yapamusoro yerapi, iyo ORR ine chirongwa che 100-mg (n = 7) yeEpacadostat powder yaiva 14%, pakanga pasina CR, uye DCR yaiva 61%. Muchikamu che 300-mg (n = 24), iyo ORR yaiva 25%, ine 1 CR uye DCR ye71%. Varwere vane tumorama PD-L1-positive (n = 10) vane ORR ye30% uye avo vane zvirwere zvisina kunaka (n = 8) vane ORR ye13%. Mhinduro dzose dzakapfuurira pakuongororwa, pamwe nemakore makuru kupfuura mavhiki e24.
Muna 29 vakaongororwa varwere vane kenza yevana, iyo ORR yaiva 14% uye DCR yaiva 31%. Paiva na 1 CR mumurwere ane kurapa neive, BRCA-negative, PD-L1-positive chirwere. Muchirwere cheC26 neCRC, avo vane microsatellite kusagadzikana (MSI) vane ORR ye25% uye avo vane zvirwere zvakasimba zve microsatellite havana kuwana mhinduro.
"INCB024360 powder pamwe nivolumab haina kuratidza chiratidzo chekushanda muvanhu vasina kusarudzwa vegomarara reovarian ovancer uye varwere veCRC," akadaro Lewis nezve mhedzisiro. Nezve kuferefetwa kweramangwana, akataura kuti "kwekutanga kuchengetedzeka uye kushanda kwemhedzisiro kunotsigira kumwe kuongorora kwe nivolumab uye Epacadostat poda mukurapa-vasina ruzivo varwere vane melanoma uye nevarwere vane SCCHN."
Nzira yekutenga Epacadostat powder: kutenga INCB024360 poda kubva kuAASraw